Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Kolombia
Mmadụ ò kwesịrị ịgwa anyị mgbe ọ ga-achọ ịbịa legharịa anya? Ee. Iji hụ na ndị bịara ilegharị anya n’otu oge akarịghị akarị, anyị ga-achọ ka ndị ọ bụla ga-abịa ilegharị anya gwa anyị agwa tupu ha abịa n’agbanyeghị ole ha ga-adị. Ọ ga-adị mma ma unu gwa anyị ọ dịkarịa ala otu izu tupu oge unu ga-achọ ịbịa eruo. Ya bụrụ n’oge ezumike ka unu ga-achọ ịbịa, biko gwanụ anyị n’ezigbo oge.
Olee oge i kwesịrị irute n’ụbọchị ị chọrọ ịbịa legharịa anya? Iji hụ na ndị bịara ilegharị anya n’otu oge akarịghị akarị, biko bịa ọ dịkarịa ala nkeji iri tupu oge ị chọrọ iji malite ilegharị anya eruo.
Vía a Ecopetrol
Ha na-ahazi ọrụ ikwusa ozi ọma Ndịàmà Jehova nọ na Kolombia na-arụ. Na-asụgharịkwa akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Kolombia nakwa n’ọtụtụ asụsụ ndị a na-asụ na Kolombia. Ha na-ebipụta akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl, na-ebugakwara ha ọgbakọ niile nọ na Kolombia na mba ndị dị ha nso.